မိတေဖိုး - "အမုန်းစကားများအတွက် အသုံးချခံ မိန်းမသားများ" - MoeMaKa Media
Home / Critics / Mi Tay Po / Variety / မိတေဖိုး - "အမုန်းစကားများအတွက် အသုံးချခံ မိန်းမသားများ"
Critics, Mi Tay Po, Variety
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀
ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ မလေးစားခြင်း၊ စတဲ့ ခံစားမှုတွေက လူ့သဘာဝမို့ ရှိကြမြဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ခံစားမှုပေါ် လိုက်ပြီး ကိုယ်နဲ့မတူ တပါးသူကို ပြစ်တင်ပြောဆို မှု၊ သရော်လှောင်ပြောင်မှု၊ ရိုင်းပြစွာ ပြောဆိုမှုတွေကနေ အမုန်းစကားတွေ ကပေါက်ဖွားလာပါတယ်။ အဲသည် အမုန်းစကားတွေကို ပြန်ခံစားပြီး အမုန်းတွေ တုန့်ပြန်ရင်းနဲ့ အမုန်းစကားတွေက ပွားများ လာပါတော့တယ်။
ကျမတို့ ဟာ ပျူငှာတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ အပြုံးချိုတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ကူညီတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ် ကျေနပ်ကြ လေတယ်။ တခါတလေ တိုင်းတပါးသားတွေကလည်း သည်လို ချီးမွမ်းထောပနာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ တွေက ဆဲရင်းနဲ့ ပျူငှာကြ၊ ဆဲရင်းနဲ့ ပြုံးပြကြ၊ ဆဲနဲ့ ကူညီတတ်ကြတဲ့ လူတွေပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ တော် တော် အဆဲသန်ကြပါတယ်။ ဒါတောင် နိုင်ငံသား အများစု ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာတရားမှာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုတာ၊ လိမ်လည်ပြောဆိုတာကို ရှောင်ကြဥ် ဖို့ အခြေခံကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ကို သွန်သင်ထားတာပါ။
ဘာသာတရားတွေက ဘယ်လိုပဲ ဆုံးမ ဆုံးမ ကျမတို့ လူမျိုးတွေ ဆဲတတ်တာက စရိုက်ဖြစ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့လို့ နုတ်ဆက်ရင် အဆဲလေးနဲ့ နုတ်ဆက်တတ်တယ်။ စကားတစ်ခုခု ပြောတော့မယ် ဆိုရင် အဆဲလေး စ လိုက်ပြီးမှ ကျန်တာဆက်ပြောတယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကျမတို့ နေ့စဥ် သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ကားတွေ ရထားတွေ၊ စျေးတွေ စတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ အများစုရဲ့ ဆဲဆိုသံတွေကို သတိပြုမိ လောက်အောင်ကို ကြားရပါတယ်။ တခါတလေ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ သွားလာရင်း ယောက်ျားလေးတွေ အချင်ချင်း ဆဲဆို ပြောဆိုနေတာကြားနေရတာ နားမုဒိမ်းကျင့် ခံနေရသလိုပါပဲ။
နောက် လမ်းဘေးက အဆောက်အဦတွေ၊ ပြည်သူပိုင် နံရံတွေ မှာလည်း အလကားနေရင်း ဆဲတဲ့စာလုံးတွေ ရေးပြီး လက်ကမြင်း ထားကြတာလည်း လူတိုင်းမြင်ဖူမှာပါ။ အဲတော့ လူတွေက ဆဲတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းတော့တဲ့ အမူအကျင့်၊ လူမျိုးရဲ့ စရိုက် လို့တောင် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အနေအထားဖြစ်လာတော့တာပါ။ ပိုပြီး ထင်ရှားလာစေတာကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ အထူးသဖြင့် ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာတွေ အသုံးပြုလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျမတို့တွေ အဆဲကမ္ဘာထဲ ရောက်တော့တာပါပဲ။ အဲသည်မှာ မိန်းမတွေ ရော ယောက်ျားတွေရော မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီး အဆဲပြိုင် ကြပါတော့တယ်။
ကာတွန်းလေး တစ်ခု ဖတ်ဖူးတယ်။ ရေးတဲ့သူတော့ မမှတ်မိတော့လို့ မဖော်ပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ လူတွေ ဘာဖြစ်လို့ စာအုပ်မဖတ်တော့ပဲ ဖေ့ဘွတ်က စာတွေပဲ ဖတ်ကြတော့တာလဲ လို့ တစ်ယောက်က မေးတော့ စာအုပ်က ဖတ်ပြီး ဆဲလို့မရဘူးလေကွာ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာရေးတာက ဖတ်ပြီး ဆဲလို့ရတယ်တဲ့။
ကဲ…. အဲလောက် ရှိတာ ဆဲကြပါ...ဆဲကြပါ… စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆဲကြစမ်းပါ။
သို့သော် ဆဲသမျှ စကားလုံး အတော်များများက အမျိုးသမီးတွေကို ထိပါးစော်ကားထားတဲ့ ချိုးနှိမ် နှိမ့်ချ ထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ က အထိရောက်ဆုံး ဆဲလုံးတွေ ဖြစ်နေတာ ကတော့ သည်လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အမျိုးသမီတွေ အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော်ပြနေသလိုပါပဲ။ မင်းအမေ…. မင်းနှမ… မင်းဂျီးဒေါ် ...မအေ၊ နှမ ....အစချီတဲ့ ဆဲမှုတွေမှာ မိန်မသားတွေက ပါနေရတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ သည်လူ့ကို မုန်းတာ ဖြစ်ပေမဲ့ သည်လူ့ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက မိန်းမတွေကို ဦးတည်ပြီး တိုက်ခိုက်ခံ နေရတာက ဆိုးရွားပါတယ်။
အမုန်းစကားတွေအတွက် အမျိုးသမီးတွေကို အသုံးချနေတယ်လို့ ဆိုလို့ အမျိုးသားတွေကိုချည်း တရားခံပြေးမြင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီး အမျိုးသား အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ စရိုက်ပါ။ နင် မိန်းမလို မိန်းမရ မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့စကားကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်အောင် ပြောတဲ့စကားအဖြစ် မိန်းမတွေ ကိုယ်တိုင် ကရော ယောက်ျားတွေ အချင်းချင်းကရော သုံးလေ့ရှိတယ်။ ဘယ်ခေတ်က ဘယ်သူထွင်ခဲ့ပြီး ဘာအဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုခဲ့ သလဲ မသိပေမဲ့ ခုအချိန်မှာတော့ စကားကို တည်တည်ကြည်ကြည်မပြောတာမျိုး၊ တိုက်ရိုက် ရင်ဆိုင် မဖြေရှင်းရဲတာမျိုးတွေ ကို ကိုယ်စားပြုဖို့ တွင်ကျယ် လာပါတယ်။ တခါတလေ မိန်းမလို မိန်းမရ အောက်တန်းမကျနဲ့လို့တောင် တွဲဘက် သုံးတတ် ကြပါ သေးတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနားနီးလာတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်မဲ့ ပါတီတွေရဲ့ ပရိသတ်အသီးသီးမှာ အစွန်းရောက်တွေပါကြပါတယ်။ အဲသည် အစွန်းရောက်တွေက တဖက်ပါတီတွေ အထူးသဖြင့် တဖက်ပါတီက အမျိုးသမီးဖြစ်နေသူတွေအပေါ် ပိုပြီးတော့ နံမည် ဖျက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမှ ဆိုတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်း၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု အပိုင်းတွေကနေပြီး တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ မမှန်သတင်း လုပ်ကြံပြီး ဖြန့်ဝေကြပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ကြည့်ရင် လှလှပပ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမျိုးသမီးလေးတွေ ပုံတွေမှာ မထီလေးစား အရေးအသားတွေ၊ သရော်လှောင်ပြောင်တဲ့ အရေးအသားမျိုးတွေ ရေးတတ်ကြပါတယ်။ သည်လိုရေးတာတွေက တဖက်အုပ်စုသာမက ကိုယ့်အုပ်စုချင်းကအမျိုးသားတွေကပါ ရေးတတ်တာမျိုးပါ။
အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူဆိုလည်း ကြီးတဲ့သူ အလျောက်ပဲ သည်အသက်အရွယ်နဲ့ သည်လို ဝတ်စားရလား၊ ဆိုတာမျိုးကဲ့ရဲ့တာကိုလည်း တချို့က နိုင်ငံရေးလုပ်ရပ်ကို ဝေဘန်တာတွေနဲ့ ရောထွေး ပြောဆိုတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ အရှိန်အဝါရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း သူက သူ့အနားမှာ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်တဲ့ အမျိုးသားတွေကိုပဲနေရာပေးတာ၊ အမျိုးသမီးချင်းဆိုရင် နှိမ်ထားတာ စတဲ့ စွပ်စွဲမှုမျိုးတွေနဲ့ နံမည် ဖျက်တတ် ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို ကစားကွင်းလိုသဘောထားသူတွေရဲ့၊ နိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာ အမျိုးသမီတွေက နံမည် ဖျက်စရာ အထောက်အကူ ပစ္စည်းလိုပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အများစုက မီးမွှေးခံရတာပါ။ မွှေးတဲ့ မီးမှာ မီးစာ အဖြစ် သုံးဖို့က အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပုံဖော်ချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ အတွက် အမျိုးသမီးတွေကပဲ အသုံးချခံကြရပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကလေး ငယ် တို့လို့ တွဲလောင်း အမျိုးသမီး ဒုက္ခသည်တွေ ပုံကို ချပြကြပြီး ဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတွေပါ လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သည်အမျိုးသမီးတွေကို ဖိနှိပ် မျှော်လင့်ချက်မဲ့စေတဲ့ အထဲမှာ လူမျိုး တူချင်းက အမျိုးသားတွေလည်း ပါနေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးအသီးသီးမှာ ယူစွဲထားတာကတော့ တို့ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ်မှာ တို့ လူမျိုးတူချင်း နိုင်စားတာတွေက တရားပါတယ် ပြဿနာ မဟုတ်ပါ၊ တခြားလူမျိုးတွေကတော့ လာမနိုင်စားကြနဲ့ ဆိုတာမျိုးတွေပါ။
ကျမတို့ လိုချင်တာ လေးစားမှု၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ တန်းတူရည်တူ ရှိမှုပါ။ လှောင်အိမ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ့်ဘဝ ကိုပြဌာန်းခွင့် ပေးလိုက်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ တွေးမြင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ တိုက်ခိုက်ရာမှာ အသုံးပြုစရာ(သို့) ဦးတည် တိုက်ခိုက်စရာ သားကောင်တွေ လိုသဘောမထားပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စေတမာန်တွေလို သဘောထားတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီး ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမုန်းပွားမှု သံသရာမှာ အသုံးချခံ မိန်းမသားတွေ အဖြစ်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ၊အမုန်းသံသရာတွေမရှည်ဖို့ ၊အမျိုးသမီးတွေသည် ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ပြယုဂ် ဖြစ်လာစေဖို့ ကျမတို့ တစ်ဦးချင်းစီက ငြိမ်းချမ်းမှုကို လက်ဆင့်ကမ်းလို့ အပြုံးစကားတွေ ပါးကြပါစို့။
“ လူတို့နှလုံးသား.... အမုန်းမပွားကြဖွယ်... မေတ္တာဆွတ်ဖြန်း.... ချစ်ပန်းလှိုင်ကြွယ်.... အကြင်နာတရားတွေ ထားမှ စိတ်ထားမြတ်မယ်.....အမြဲသာ တွေး......တွေးဆဖွယ်.... အသည်းမှာ အေး ..... အေးမြမယ်...စေတနာတွေ မိုးဆွေရွာ...ဖြိုးဝေကာကွယ်........နှလုံးသားဝယ်... အမုန်းတရားဖယ်...........အပြုံးများ ကြွယ်ကြစေဖွယ်.......”
မိတေဖိုး - "အမုန်းစကားများအတွက် အသုံးချခံ မိန်းမသားများ" Reviewed by MoeMaKa on 10:14 AM Rating: 5